MotioCI Inogonesa Agile uye Yega-Yekuzvishandira BI kuIBM - Motio
IBM Leverages Motio Kuchengetedza Mari uye Kuvandudza Kugutsikana muPasi Pasi Pakakura eCognos Nharaunda
IBM Bhizinesi Ongororo Center yeCompetency uye Bhuruu Insight
IBM Business Analytics Center yeCompetency (BACC) inotarisira IBM's bhizinesi-rakakura bhizinesi analytics nharaunda uye inomisikidza maitiro anotungamira vanogamuchira kuti vabudirire zvinobudirira bhizinesi analytics mhinduro.
Kubva 2009, IBM yanga ichigadzira musoro pane yayo yemukati bhizinesi analytics (BA) zano roadmepu, kuisa pakati zvivakwa zveBA, kudzikisira kuitisa uye mashandiro emitengo, uye nekuchinja maitiro nemaitiro eBA. IBM yakasimbisa BACC pakutanga kweizvi roadmepu yekugadzirisa, kushandisa uye kushandira bhizinesi rayo analytics mutambo chirongwa. BACC inopa mazana ezviuru eBMers nekupa bhizinesi analytics zvinopihwa, masevhisi, kuitisa dzidzo uye kutsigira kwemukati.
Achibatsirwa Motio, IBM BACC iri munzira yayo yekuzadzisa chinangwa che $ 25 Million mukuchengetedza pamusoro pemakore mashanu emakore eichi chirongwa, nepo ichivandudza kugona uye kugutsikana kwemazana ezviuru evashandisi vemukati veBM Cognos.
Kubva kutanga kwechirongwa ichi, IBM BACC yakabatanidza madhipatimendi eBI makumi mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe muchigadzirwa chimwe chete cheCognos chikuva chakaitirwa pane yega gore rezve analytics rakanzi, "Blue Insight." 390
Yakavakirwa pamusoro peyakanyanya scalable System z chikuva, Blue Insight ndiyo yepasirese yepasirese gore gore komputa nharaunda yebhizinesi njere uye analytics. Blue Insight inopa simba IBMers kutenderera pasirese neruzivo uye bhizinesi nzwisiso yekuita sarudzo dzakangwara.
Pakazosvika pakati pa2013, huwandu hwevashandisi veBlue Insight hwakakura kusvika pamatanho anopfuura mazana maviri epasirese emabhizimusi epasi rose anosanganisira vanopfuura 200 maCognos vanogadzira, 4,000 testers, uye vanopfuura mazana mana ezviuru vanonzi vashandisi. Blue Insight yaibata pamusoro pe5,000 Cognos report specs, kudhirowa data kubva pamusoro pe400,000 sisitimu sosi, uye kuitisa avhareji yemamirioni e30,000 mamirioni mwedzi wega wega.
Sezvo muyero wekutora weBlue Insight chikuva ichienderera nekumhanyisa, timu yekushanda yeBACC yakazviwana ichishandisa yakawanda nguva yekushandira zvikumbiro zvekutungamira kubva kune aya maCognos mabhizimusi zvikwata.
Mumwe muenzaniso wechikumbiro kazhinji waisanganisira promotion yezvinyorwa zveBA pakati penzvimbo dzeCognos. Iyo Blue Insight chikuva inopa matatu maCognos zviitiko zvakanangwa pamatanho akasiyana eiyo BA lifecycle: Kubudirira, Bvunzo uye Kugadzira. Kune rimwe nerimwe bhizimusi timu, yezvinyorwa zveBA zvakanyorwa nevanogadzira munzvimbo Yekuvandudza, uye ndokusimudzirwa muTesting nharaunda, uko inogona kusimbiswa nehunyanzvi hwekusimbisa mhando. Chekupedzisira, BA zvemukati zvakapasa bvunzo dzakakodzera zvinokurudzirwa kubva kuTesting nharaunda kuenda kune Kurarama Kugadzirwa nharaunda, uko inogona kudyiwa nevashandisi vekupedzisira.
Kune zvikwata zvebhizinesi zvinoshandisa iyo Blue Insight chikuva, nguva yega yega yezvinyorwa zveBA zvaive zvakagadzirira kukwidziridzwa pakati penzvimbo dzeCognos, tikiti rekukumbira sevhisi raizogadzirwa riine ruzivo rwechikumbiro. Tikiti raizozopihwa kunhengo yeboka revashandi veBACC, iyo yaizosimudzira zvirimo, kusimbisa kumisikidzwa kwayo munzvimbo yakatarwa, vozovhara tikiti.
“Kusati kwatanga MotioCI, iyo promotions izvo zvataiita kubva kuBudiriro, Bvunzo, uye Kugadzira zvese zvakaitwa nemaoko, ”akadaro Edgar Enciso, Project Manager weBACC Support. “Tinounganidza marepoti kana mapakeji akasarudzwa, toaendesa kunze kwenyika kubva kwatinobva tobva taapinza munzvimbo yatakananga. Isu tinobva tazoda kuongorora marongero akadai semvumo pane izvo zvakasimudzirwa. Dzimwe nguva isu taive tichiita mazana matanhatu emushumo promotions uye 300 package promotions mwedzi wega wega. ”
Zvimwe zvinowanzo kuve zvikumbiro zvehutongi Kuchengetedza - kuchengetedza kwemapoka ekuchengetedza mukati memabhizimusi zvikwata nenzvimbo, nezvimwe.
Zvinetso - Kudiwa kweKupihwa simba uye Hutongi
Zvimwe zvezvipingaidzo zvekutorwa kweiyo Blue Insight chikuva yaive yezvematongerwo enyika kwete yehunyanzvi. Kazhinji nechero simba rekubatanidza, zvikwata zvinofamba kubva kunzvimbo dzinovharirwa nedhipatimendi reBI kuenda kunzvimbo yepakati inotarisirwa dzimwe nguva zvinotya kurasikirwa kwekuzvitonga. Zvakare, timu yeBACC inoona nezve Blue Insight yaida kumanikidza imwe nhanho yekutonga kuitira kuti zvikwata zvakasiyana zvisatsikirane munzvimbo yakajairika.
Kuita kuti chiono cheBlue Insight chive chokwadi chaisanganisira zvakajairwa zvehunyanzvi uye zvekuita nyaya dzepakati, asiwo zvemagariro uye zvefilosofi: Ko timu yeBlue Insight yaigona sei kugonesa vashandisi kuti iyo yepakati yakavanzika gore mhinduro yaive nzira chaiyo yekumberi kune bhizinesi reIBM kuti riite 2015 roadmepu? 1
Chikwata cheBACC chine chekuita nehutano uye manejimendi yeiyo yakagovaniswa BA chikuva, asi timu yega yega yebhizinesi inoitirwa papuratifomu ine basa rekunyora, kuyedza nekuchengetedza yavo yega BA zvirimo. Rimwe rematambudziko akakosha mukusimbisa uku kwave kuratidza kuenzanirana pakati pekupa simba timu yega yega yebhizinesi kuti iite nenzira yekugadzira uye yekuzvimiririra uye ichiri kumanikidza matanho akakodzera ehutongi nekuzvidavirira kuona kuti mapoka akasiyana haakwikwidzane iyo yepakati Cognos nharaunda.
Takatarisana nekupa rakakura bhizinesi analytics nharaunda munyika yeakasiyana seti mazana enzvimbo akagoverwa zvikwata zvebhizinesi, iyo IBM BACC yakatanga kutsvaga mhinduro dzinogona kushandura akawanda ezuva nezuva mabasa eCognos manejimendi, kupa huwandu hwakawedzera hwekuzvishandira. , uye zvakadaro chengetedza huwandu hunodiwa hwehutongi uye kuzvidavirira.
Mushure mekudzamiswa kwakadzama kwesarudzo dzekutengesa dzekushandura vhezheni yekudzora uye kuendesa zvemukati munzvimbo dzeCognos, iyo IBM BACC yakasarudzwa MotioCI. The MotioCI kuburitswa kuchikuva cheBlue Insight kwakarongerwa kuitwa panguva imwe chete pamwe nekukwiridzirwa kuCognos 10.1.1, kuyedza kwakatanga pakati pa2012.
Sezvo BACC yakachinja zvishoma nezvishoma timu yega yega yebhizinesi kubva kuCognos 8.4 kuenda kuCognos 10.1.1, timu yakashanduka yakawanawo mukana we MotioCI kugona. Mugore rekutanga, timu yekushanda yeBACC yakashandisa MotioCI kuita angangoita 60% yezvinyorwa promotions uye ndatanga kugonesa zvikwata zvebhizimusi kushandisa MotioCI yekuzvishandira promotion.
Inotongwa Yega-sevhisi Cognos Kuendeswa
Imwe yemabhadharo ekukurumidza zvakanyanya pabhodhi rimwe nerimwe reBlue Insight timu yebhizinesi ku MotioCI rave riri iro basa rebasa rinodikanwa kusimudzira BA zvemukati pakati peiyo Development, Test & Production Cognos nharaunda. Uchishandisa zvirimo promotion kugona mukati MotioCI, iyo BACC yakwanisa kushanduka ichienda kune "yekuzvishandira" modhi yeBA yezvinyorwa promotion.
Kusiyana nenzira yapfuura, iyo yaisanganisira kugadzirwa kwematikiti eboka reBACC rekutsigira maneja zvemukatimotion, vane kodzero vanoshandisa mune yega bhizinesi timu ikozvino vakapihwa simba rekuita izvi zvemukati promotions pachavo. Kubva pamaonero ehutongi, pane huwandu hwese hwekuzvidavirira, kutonga uye kuongorora zvakapetwa zvakapoteredzwa yega yega yezvinyorwa promotion.
“Tine zvinhu zvinoverengeka zvine Motio izvo zviri zvepakati kune promotion process, ”akadaro David Kelly, IBM BACC Project Manager. “Iye zvino tava kukwanisa kupa mukana kuchirongwa chega chega chekugadzirisa zvirimo promotions. ”
Iyi shanduko yakadzora zvakanyanya promotion nguva dzekuchinja, dzakadzivirirwa zvingangoitika, uye dzakasunungura akakosha maawa emurume echikwata cheBACC.
“Tiri kuchengetedza nguva yakawanda tichishandisa Motio zve promotions, ”akadaro Enciso.
Zvichienderana neruzivo rwekutanga neiyo MotioCI aifariramotion kugona kwega, IBM yakaverenga kuti ichadzosera mari yakakura mukati megore rekutanga. BACC ine tarisiro yekuchinjisa akasara ezvikwata zvavo zvebhizimusi kuenda kune ino yekuzvishandira modhi mugore rinouya, ichiwedzera kuwedzera kudzoka kwayo mukudyara.
“Takaverenga nhamba yegore rose zvichibva pane zvakaitika kusvika zvino tikazviona MotioCI inofanira kutipa mari inosvika madhora zviuru gumi nezvishanu nemazana mashanu ezviuru mukati megore, ”akadaro Meleisa Holek, maneja, IBM Business Analytics Enablement Team. "Tinotarisira kuzokwanisa kuwedzera mari yedu kumusoro tichichinjisa zvikwata zvedu zvebhizimusi kuenda kuzvimiro zvekuzvishandira."
Cognos Yemukati Kutumirwa ne MotioCI
Shanduro Kudzora kweBhizinesi Kuongorora Zvemukati
Shanduro yekudzora chimwe chikamu che MotioCI iyo yakaratidza kukosha kumabhizinesi eBlue Insight Cognos. Kuva nezviri mukati nekugadziriswa kwenzvimbo dzakakura dzeCognos dzakashandurwa zvachose chero nguva paine shanduko zvakatungamira mukuwedzera kuziva uye nemhando yekuzvigutsa.
Tisati tatanga MotioCI, BACC yaiwanzo kuunzwa kuzobatsira zvikwata zvakasiyana siyana nenyaya dzakadai sekudzoserwa kwedata, kugadzirisa mishumo yakatyorwa netsaona kana kuongorora midzi-chikonzero. Kubva MotioCI yakaunzwa, zvikwata zvekusimudzira zvave zvakanyanya kuzviriritira.
"Ndinoziva nezve imwe nguva masvondo akati wandei akapfuura apo pakawonekwa mushumo wenzvimbo dzebudiriro uye tikiti rakaendeswa kuchikwata chekutsigira cheBACC," akadaro Kelly. "Takakwanisa kuvakurumidza kuvaratidza kuti ungangodzorera sei maripoti asipo uchishandisa MotioCI uye kutya kwavo kwakapera. Uchapupu hwakadai, hwatinoona nemhando yekudzora, izvo zvinoita kuti hupenyu hwedu huve nyore. ”
Chiyero chikuru cheBlue Insight chikuva uye huwandu hunoshamisa hweCognos zvemukati zvakagarwa imomo zvakaratidza kuve chinetso chinonakidza che MotioCI.
"Uchishandisa iyo System z uye DB2 matekinoroji, IBM yakawedzera Cognos padanho rinoshamisa," akadaro Roger Moore, Chigadzirwa Manager we MotioCI. "Ivo parizvino vane 1.25 Million Cognos zvinhu (mishumo, mapakeji, madhibhodhi, nezvimwewo) pasi pevhezheni yeshanduro mukati MotioCI. Kubva pane yakachena tekinoroji maonero, zvainakidza kuendesa MotioCI munzvimbo ino, uye zvinonyanya kufadza kuona kukosha kwakashandiswa nevashandisi veIBM kusvika parizvino nekudzora vhezheni uye promotion. ”
Iyo vhezheni inodzora kugona mukati MotioCI vakawedzera zvakanyanya kugutsikana kwevatengi, vakapa zvikwata simba rekugona kutsvaga kumashure apo matambudziko akaunzwa uye zvakaita kuti vashandisi vakwanise kubata zviri nani hupenyu hwekusimudzira kutenderedza mapurojekiti uye munzvimbo dzese.
Kufambidzana neBACC Strategy yekupa Simba Blue Insight Bhizinesi Matimu
kuva MotioCI panzvimbo yakabatsirawo kutsigira nyaya yeBACC mukukumbira zvikwata zveIBM izvo zvisati zvabatana neBlue Insight chikuva.
“Imwe yehondo dzedu ndeyekuti isu tine madhipatimendi aya atinoda kuunza munzvimbo yedu yepakati uye nenyaya yekuti tine MotioCI kumhanya zvirokwazvo mukana wekukwikwidza weBlue Insight vs yavo yekuisa department, "akadaro Holek. “Aya masimba ekuwedzera anopiwa ne Motio kazhinji zvinounza vanhu pamusoro pehuturu, vangangodaro vasina kutsigira kufamba pamusoro pekutanga. Kunyangwe tiine mvumo yeCIO yekuti vanhu vanofanirwa kunge vachishandisa nharaunda yedu, isu tinotofanirwa kuita mhando yekutengesa vanhu kuti vaenderere pamusoro. ”
Zvinhu zvakakosha zvekubudirira kweBACC hwave hukama nemakwikwi emukati muboka rega rega rebhizinesi kufambisa kutorwa kwenzira yepakati, uye shanduko kune "yekuzvishandira" BI modhi iyo inobvumidza timu yega yega kuramba ichipiwa simba, kunyangwe ichimhanya papuratifomu yakajairika. BACC inopa zvivakwa zvekubvumidza kuzvitonga-kuzvitonga, kuwedzera hunhu hwekuitwa kweBI asi ichideredza nguva yekuwedzera uye njodzi. Cognos uye MotioCI pamwechete kubatsira
Kugamuchira Agile BI
Kufanana nemasangano mazhinji, IBM yakachinja mazhinji emapurojekiti emukati kune imwe nzira inoshatisa mumakore apfuura. Makiyi akakosha eiyi nzira anosanganisira kugoneswa kwekukurumidza kuendesa zvemukati, yakasimba mhinduro loop nevashandisi-vekupedzisira, uye kudzivirira kweIT zvipingaidzo.
Kuenda kune "yekuzvishandira" modhi yakagonesa vanyori veIBM veCognos kusimudzira yavo yeCognos zvemukati nenzira inodzorwa uye inodzokororwa, nguva yese iyi vachichengetedza mabudiriro avo ekufambisa achifamba nhanho inokasira yavanoda. Nekushandisa yekuzvishandira-kugona kugona kwe MotioCI, mapurojekiti anogona ikozvino kuzvibata pachawo, achibvumira BACC kubuda muchikamu chekusimudzira cheimwe chirongwa uye kutarisa kune dzimwe nzvimbo.
"MotioCI yakatibatsira kufamba pamwe nekuzvishandira roadmepu uye tiri kukura nekukurumidza, ”akadaro Kelly. “Pakupera kwegore rino, mazhinji emabasa edu anenge ave kukwanisa kuita manejimendi mazhinji - kubva promotions kurongedza kuchengeteka kune chero chavanoda kuita mukati menzvimbo yavo. "Izvi zvinobvumidza timu yekuvhiya kuti itarise kune dzimwe nzvimbo dzebasa dzatiri kutarisira kuwedzera."
Makore matatu muchirongwa chayo chemakore mashanu, IBM iri kuenderera mberi ichiwedzera pamusoro pechisimba BI kufamba mukati. Kuzviongorora kuyedza ndeimwe yemabasa anotevera ari kuitwa neBACC timu.
Nhoroondo, kuyedzwa kweCognos zvemukati zvakachengetwa pane IBM yeBlue Insight papuratifomu anga ari maitiro akawandisa, uye BACC parizvino iri kuongorora nzira dzekumanikidza chikamu ichi chehupenyu hwekusimudzira. Mugore rinouya, iyo BACC ichatanga kuongorora iyo otomatiki kuyedza kugona kwe MotioCI zvese kudzikisira nguva inodiwa pakuyedza yega yega uye kuwedzera chiyero chavo. Semuyenzaniso, MotioCI ichaita basa rinobatsira mukuderedza maawa emaawa-akapihwa kuongororwa kwemanyorerwo echinyorwa mushure mega software kukwirisa papuratifomu yeBlue Insight.
Mugore rekutanga, panguva iyo chete subset yeanogona e MotioCI akaendeswa, IBM yakawana kudzoka kwakakosha mukudyara kuburikidza nekuchengetedzwa kwevashandi chete. Iyi kuchengetedza ichaenderera ichikura gore rega sekuwedzera kugona kwe MotioCI yakabviswa. MotioCI yakagonesa imwe nzira yekukurumidza kune anopfuura mazana maviri emakambani emabhizimusi eCognos mukati meBMM, yakarerutsa kugamuchirwa kweiyo yepakati Bhizinesi Yekuongorora nzira, yakawedzera kugutsikana kwevatengi uye yakavandudza kusimudzira uye manejimendi manejimendi maitiro akanyorwa uye akatsigirwa neIBM yeBusiness Analytics Center ye Kukwanisa.
$ 1 gore ROI
Cognos zvinhu pasi MotioCI shanduro control
Mushure mekudzika-kwakadzama kuongororwa kweshanduro yekudzora uye mhinduro dzekushandisa dzeCognos, IBM yakasarudzwa MotioCI kuburitsa kune ayo mazana maviri enzvimbo akagoverwa zvikwata mabhizinesi. With MotioCI, IBM yakashandura manyorerwo mazhinji ezuva nezuva mabasa ekutonga, kuwanda kwenzvimbo dzekuzvishandira, uye yakachengetedza hutongi nekuzvidavirira.